Nagu Saabsan - Sichuan Aixiang Technology Co., Ltd.
Teendhada Conch House
Multi-peak Isku teendhada
Multi-kooxdiisa Hotel teendhada
Safari teendhada House
Xiisadda Dahaarka teendhada
Multi-dhinac Isku teendhada
About teendhada Luxo
Sichuan Aixiang Technology Co., Ltd. waa khabiir of-fudud dhismeedka naqshadda ee Shiinaha, iyadoo laba magac, teendhada Aixiang Beeraha iyo Luxo hoosteedana waxaa magaceeda.
Shirkadda waxa uu ku yaalaa Chengdu, top aluminium saaraha teendhadii iyo iibka shirkada wadajir ah ee reer galbeedka Shiinaha.
Waxaan ku hawlan yihiin adeeg kiiska mashruuca one-stop design & wax soo saarka, iyo alaabta iyo adeegga ka dib markii la aqoonsado by meel kasta oo dibada & macaamiisha gudaha. Waxaan 'dib u go'ay si ay u bixiyaan naqshado aadka shakhsi iyo kartoo teendhada glamping, raaxo miciinka teendhada, iyo hotel teendhada barta muuqaal dabiici ah, dalxiiska hantida maguurtada, ganacsiga, dhaqaalaha firaaqada dhawrista, qorshaynta design deegaanka iyo qaybaha kale ee la xiriira.
Waxaan haynaa xul ballaaran oo teendhooyin fuushan, xog aruurin teendhooyin si aad u xulato.
Macaamiisha raadinaysa qaabeyn cusub oo casri ah, waxaan ku bixin karnaa adeeg heer sare ah oo heer sare ah.
Waxaan bixinaa adeegyo ballaaran oo kala duwan laga soo bilaabo qaabeynta fikradda illaa iyo hirgelinta mashruuca kaamamka.
Solution noqda-fure u Light-Miisaanka Qaabdhismeedka Architectural
Shirkadda ayaa qalabka wax soo saarka oo casri ah, cilmi & horumarinta xoog xoog iyo dhismaha, koox xirfad leh oo ay weheliso sano oo waayo aragnimo farsamo. Waxaan bixinaa design, wax soo saarka, rakibaadda, iyo adeegyada dayactirka ee dhammaan noocyada kala duwan ee daawaha aluminium iyo miisaanka iftiin dhismeedka jir steel.
Waaxda Engineering iyo Technology The hadda wuxuu leeyahay labo constructors PRC Certified heerka koowaad, saddex constructors PRC Certified fasalka labaad, toddoba samaynta sare iyo lix iyo toban iibka, kuna jira shaqooyin ay ka badan 5 sano oo ku siin kara design alaabta xirfad iyo xal mashruuca macaamiisha dhaqso ah oo waxtar
Qiimayaasha Our: mahadnaqidda, daacad ah, xirfad, dareen, co-operative
teendhada Luxo heysta falsafada ganacsiga in daacadnimada sida xididka, tayada horeeya, hal-abuurnimo is-tiirsan kula aragti cusub oo ay ku jaangooyo si faahfaahsan kasta oo qalliin, bixinta badeecada kharash-ool ah iyo adeegga macaamiisha ee gudaha iyo dibaddaba leh our aragti cusub.
Waxaan ma siin oo kaliya heerka adeeg ee ka dhigaysa macaamiisheena dareemayaa boqortooyada. Waxaa had iyo jeer waa si diiran u soo dhaweyn aad beertid baaritaan shaqo-site our, soo dhaweyn si ay u dhisaan xiriir ganacsi-wadaag nala.
No.879, Wadada Ganghua, Degmada Pidu, Chengdu City, Shiinaha
Hel Design Free
Sida loo dayactiro teendhada hoteelka 丨LUXO TEN...
Sida loo doorto teendho dhalaalaysa oo habboon
Saamaynta teendhooyinka huteelka ee caterin...
LUXO TENT 丨 Codsiga spherical t...
LUXO TENT 丨 Diirada saar Teendhada dhalaalaysa
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Featured Products ,Sitemap ,Mobile Site
Raaxo Safari teendhada, Safari teendhada, teendhada Cotton mataleysay Bell , Hotel teendhada, Hotel Safari teendhada, teendhada dibadeed ,